Achịcha mara mma nke mara mma 2017 - acha uhie uhie na oji, na rhinestones na ụkpụrụ
Nlepụta nkedi bụ otu n'ime isi okwu ndị inyom na-elebara anya na ịgbaso usoro ejiji ọhụrụ. A na-ewere Nri Ime nri 2017 dịka ihe na-eme nke afọ a ma dị iche iche dị iche iche, n'etiti nke onye ọ bụla fashionista nwere ike ịhọrọ dịka o si atọ ụtọ.
Emem aka nri 2017 - ejiji ejiji
N'afọ a, enwere mmekọahụ na-enye ohere iji gosipụta echiche ha mgbe a ga-emepụta mbọ ahụ "ọnwa manicure". O kwere omume ịhapụ ụdị ọchịchọ ndị dị otú ahụ, bụ nke ọ ga - edekọ:
otu ngwakọta nke matte na glossy varnishes. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ dịghị atụ aro ka ha jikọta ha, n'afọ a, a nabatara ya nke ọma. Nchikota a na-ele anya nke ukwuu na nke mbụ;
nchikota uzo abuo di iche iche, nke mere ka nkpa ogwu di nma ma buru ihe ncheta;
Nabata otu nchikota nke na-egbuke egbuke ma dị jụụ, ebe ha kwesịrị ịdị ka ya. Dịka ọmụmaatụ, emerald kacha mma maka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ;
edozi afọ 2017, nke "moon" na jaket dị n'otu oge ahụ, a na-ewere ya dị ka ihe dị mma ma dị mkpa n'afọ a;
otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu bụ mkpuchi ọnwa nke ọnwa, nke nwere oghere nke dị iche. N'otu oge ahụ, ọ ghaghị ịcha achacha, nke na-enye ya ịdị mma na nhichapụ. Usoro a dị mma maka ogologo oge, ọ na-enyere aka ile anya ka ọ mara mma.
Ememe Red Moon
N'afọ a, ọ dị ezigbo mkpa ịchọtaghachi ya , nke na-ejikọta ya na ngwa nke na-acha uhie uhie. Ị nwere ike iji uhie, burgundy, agba aja. Akpụkpọ ụkwụ kpụ ọkụ n'ọnụ na nke a ga-agbaso ihe ndị a:
na-emekarị, ọ bụghị na-ese ya mmiri, jikọtara ya na-acha uhie uhie elu;
iji nweta usoro nkwekọ, ọ dị mkpa ịhọrọ agba nke lipstick na ụda;
iji mee ka ọ bụrụ ihe okike, ọ dị mkpa na ọdịdị nke "ọnwa" dịka o kwere mee ya na ọdịdị nke ihe nkedo ahụ, ya mere, ọ ka mma ịhọrọ ụdị mgbanwe nke kachasị mfe iji mụta nwa.
Na ejiji abụghị nanị na-acha efere pastel agba, kamakwa ndị na-enye onyinyo ahụ doro anya. Ya mere, agba agba nke zuru okè bụ ihe dị mma, iji mepụta nsị aka n'emekere mkpịsị aka. A na-atụ aro ka ị jiri ụdị mkpuchi ndị dị otú a:
zuru oke jikọtara na agba aja;
Nchikota kpochapụla bụ nwa na-acha ọcha;
nwere ike jikọta ya na varnish doro anya;
anya dị mma, ma ọ bụrụ na eji oji na-ekpuchi oji: ìhè pink, Mint, nwayọọ acha anụnụ anụnụ;
ndị na-eto eto, na-enye ìhè, ga-abụ akara aka ọnwa 2017, nke e nwere nchikota nke oji na uhie;
enwere ike iji oji mee ihe maka ma na-abata "ọnwa", ma na-ese onyinyo ntu ahụ.
Pink ọnwa manicure
Maka inwe mmekọahụ na-achọ ịmepụta ọdịdị dị nro na nke ịhụnanya, ọkpụkpụ mara mma nke ọnwa na-eme na agba aja aja dị mma. A na-ejikọta ihe na-acha chaa chaa na-acha ọcha na-acha ọcha ma ọ bụ transperente. Dịka ihe eji edozi ihe, ị nwere ike itinye ụdị rhinestones niile, pebbles, sequins na sequins.
Ọkpụkpụ nke ehihie na usoro
Iji wepụta ma mepụta ihe oyiyi a na-agaghị echefu echefu, ndị inyom na-eji echiche dịgasị iche iche nke nchịkọta nke ọnwa. Na-emekarị abụghị naanị nchịkwa nhọrọ okike, kamakwa nail art, mma na akwụkwọ dị iche iche. Iji mee ha, ọ dịghị mkpa iji nweta ọrụ nke nna ukwu, ị nwekwara ike itinye onyinyo ahụ n'onwe gị site n'enyemaka nke mpempe akwụkwọ dị iche iche. Nhọrọ ndị kachasị ewu ewu gụnyere:
geometric ihe nakawa etu esi;
ebum n'uche anụmanụ;
ụdị okooko osisi dị iche iche;
Ọchịchị na-egbuke egbuke na Rhinestones
Mee ihe oyiyi na-egbukepụ egbukepụ, nke dabara maka ememe na ndị ọzọ, ga-enyere aka ọnwa ọnwa na-egbuke egbuke. A na-anọchite anya ya dịgasị iche iche ọdịiche, nke a na-eji ihe dị iche iche eme ihe:
enwere ike ịnweta uru nke sequins site n'enyemaka nke mpempe akwụkwọ pụrụ iche, nke na-ekpuchi "ọnwa";
ị nwere ike imeta ọhụụ dị mma ma ọ bụrụ na i tinye ihe mkpuchi;
A na-ekpuchi ihe mkpuchi na ihe ngosi pụrụ iche maka ọdịdị dị otú ahụ.
Matt ọnwa manicure
Matte nyl-art na-enwe mmasị na-enweghị agbanwe maka ọtụtụ oge. N'afọ a dị ugbu a, ọ ka dị mkpa, ma ọ bụ ihe ụfọdụ dị ọhụrụ na nke mbụ na-emepụta akara aka n'ememme ehihie 2017. Mgbe ị na-emepụta atụmatụ, a na-atụ aro ka ị tụlee ụfọdụ nuances ndị dị ka ndị a:
A ghaghị iji nlezianya jiri nlezianya mee ihe, n'ihi na akụkụ ya bụ na ọ na-enwe ike imesi ike ọbụna obere ntụpọ;
a ga-ahọrọ ọnya na ọgaranya, nke a ga - enyere aka mee nhọrọ kachasị mma;
A na-ewere na manicure na-acha anụnụ anụnụ dị ka ihe na-enweghị atụ nke oge. Ụdị niile dị n'elu: na-egbuke egbuke, na-enwu gbaa, ọchịchịrị. Ọ nwere ike ịbụ azure, cobalt, mmanụ ọkụ, sapphire, ultramarine;
acha uhie uhie na mgbanwe ọ bụla ka dị na-emekarị ma na-anọchi anya kpochapụghị agbanwe agbanwe;
ọ bụrụ na ị na-eji oji, ị nwere ike nweta mmetụta nke nnukwu ọnụ velvet ọnụ. Karịsịa ma ọ bụ kwekọrọ n'uwe mgbede;
n'ihi na ụmụ nwanyị ndị chọrọ iji nwayọọ na ịlụ ịhụnanya, ọ bụla pastel na-ekpuchi; lilac , pink, piich, lavender, Mint;
mee ka ogho nke na-egbuke egbuke na oghere na 2017 ga-enyere aka ọkụ na odo;
Dị ka mgbakwunye, ị nwere ike iji ọcha na agba aja aja, mana ị na-ewere ha dịka ihe ndabere adịghị atụ aro ya, n'ihi na ha nwere ike na-agwụ ike;
A na-eji ụdị ihe osise ọ bụla na ihe ịchọ mma mma;
Ngwakọta dị mma nke ngwongwo na mbelescente. Nke a bụ n'ihi ọdịiche, nke nwere ike ịmasị mmasị.
N'ihe na-eme ka a na-egbuke egbuke «ude anya»
Ihe ọzọ a na-eji eme ihe a na-emekarị n'afọ a nwere ike ịkpọ ntu nkata . Ọ na-ele anya nke ọma, na-enwe mmetụta dị omimi nke iju mmiri. Ihe eji eme ihe n'ememme ehihie 2017 nke ụdị a bụ ihe dị iche iche:
Ọchịchị gbara ọchịchịrị kacha mma. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ha dị nso na okike, dịka ọmụmaatụ, chestnut, ọlaedo na-acha odo odo, olive oliv;
acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, emerald na marsh;
acha na-acha anụnụ anụnụ, odo odo, burgundy, cherry, plum;
Ọdịdị ahụ dị mma ga-abụ isi awọ, ebe ọ ga-adabara n'ụzọ zuru oke na uwe ọ bụla. A pụkwara iji atụmatụ a gaa ụlọ ọrụ, na maka mmemme mgbede, na maka outings kwa ụbọchị;
ọ bụrụ na achọrọ, ị nwere ike icho mma na rhinestones, ma isi ihe abụghị iji dochie ya, dị ka ọhụụ "nkedo" manicure 2017 bụ catchy ugbua na ya. Ya mere, a gaghị etinye ihe mgbochi n'ihe niile, ma họrọ aka na mkpịsị aka;
otu uzo abuo ma obu abuo e ji ese ihe na-ese ya na ihe di nma. Nke a ga - eme ka olu okwu mara mma. N'otu oge ahụ n'elu ebe a na-ekpo ọkụ, i nwere ike ịdọta ụda magnetik. Ọ bụrụ na ọchọrọ, ha nwere ike ịchọta ya na rhinestones.
Ụdị nhicha na-edozi ahụ
Maka ụmụ agbọghọ ndị chọrọ ịmepụta ọdịdị ịhụnanya, ọnwa nke na-acha nwayọọ nwayọọ, nke a na-eme n'èzí ma na-acha ọcha, ga-eme. Karịsịa ọ na-eji ya na mbọ mkpịsị aka, ma iji mee ka ọkpụkpụ ahụ dị mma, ịkwesiri ịgbaso ndụmọdụ ụfọdụ:
A ghaghị ime oghere ahụ n'oge ọhụụ, ma nwee ihu ọchị nke dị "azụ" dị nnọọ njọ;
a na-ese onyinyo nke dị na ya, ọ ga-adị mma ka ọ bụrụ na ị ga-ewere ya na ọ ga-adị na ya.
Ị nwere ike itinye akara ọhụụ ọcha nke ọnwa ọcha na ọnwa ọhụụ nke emere na ụda ọhụrụ.
Mkpụrụ aka na-egbuke egbuke
N'afọ dị ugbu a, otu n'ime usoro kachasị ọhụrụ bụ iji ejiji ọnwa na oghere onu. Uru ya gụnyere eziokwu ahụ na ọ dị nro, nke dị ọhụrụ na nke mbụ. Enwere ike inye ya na ọdịiche dịgasị iche iche, ihe kachasịsị na ya bụ:
A na-etinye ya na mkpịsị aka niile.
ọ nwere ike ichota mkpịsị aka ole na ole;
varnish na-acha uhie uhie nwere ike jikọta ya na ma ọ bụ nke na-egbuke egbuke;
ọ bụrụ na achọrọ, ị nwere ike iji rhinestones dị ka ihe ndozi.
Ọnwa abụọ ọnwa
Ebube na-egbuke egbuke na-egbukepụ egbuke egbuke mara mma, n'ihi na ihe okike nke a na-ejikọta ụzọ nke okpukpu abụọ. Ihe ndị na-enweghị atụ gụnyere:
Ịdị mfe na arụmọrụ, ma ọ bụrụ na achọrọ, ọ bụghị naanị onye nweworo ahụmahụ, ma ọbụna onye mbido ga-anagide usoro a;
enwere ike ịjikọta ya na ụdị ọrụ nkedi ndị ọzọ, ị nwere ike ịmepụta mkpịsị aka abụọ na nke abụọ, ma tinye ụfọdụ n'ime ihe ndị ọzọ;
ikike ime ihe n'ememe ọnwa abụọ 2017 ma site n'enyemaka nke ihe osise oge ochie nke ndị na-agafe agafe, na ụzọ "n'ụzọ dị iche";
mfe nke imewe maka ogologo oge ọ bụla, ma nhọrọ zuru oke dị ka nkezi;
A na-ejikọta ọhụụ ọ bụla, yana ibe nwere ike ịbụ uzo;
ọ bụrụ na achọrọ, ị nwere ike icho mma ma ọ bụ rhinestones.
Otu n'ime nhọrọ maka ịmepụta ihe na-ese onyinyo bụ eserese. N'afọ a, nnukwu ewu ewu bụ nhazi nke ọnwa ọnwa na ngwa nke monograms. Ọ bụrụ na ọchọrọ, ha nwere ike itinye ha na onwe ha, otu akụkụ nke usoro bụ ịmekọrịta ọtụtụ akara. Otu n'ime ụdị isi monogram nwere ike ịchọta dị ka ndị a:
French - na-etinye na na n'akụkụ ihu nke nail efere, nke na-enye ha mma;
nke mbụ - etinye aka na nkedo ahụ dum, ntule na mkpịsị aka niile kwesịrị ịbụ otu;
nke oge a - a na - etinye aka na elu ahụ dum, ebe ụkpụrụ dị iche na otu ma ọ bụ mkpịsị aka ọzọ. A na-ewere usoro a dị ka ihe siri ike;
monograms nwere ike ijide ala dum, ma ọ bụ kpuchie akụkụ isi, na-ahapụ ọnwa "ọnwa" ahụ.
Uwe isi ejiji 2014
Uwe ejiji nke ụmụ nwanyị 2013
Ebube na-acha odo odo 2016
Anwụrụ akpụ ụkwụ ụkwụ na mgbụsị akwụkwọ 2013
Foto ntanetị nke China
Egwuregwu windo 2013
Ejiji n'oge mgbụsị akwụkwọ Jaketị
Uwe ejiji na ngụsị akwụkwọ 2015
Uwe - opupu 2015
Nkịtị maka obere ntutu na bangs
Ụlọ ndị na-ere ahịa bụ Sotheby setịpụrụ otu nchịkọta David Bowie maka ịzụ ahịa
Njikọ na mmadụ
Paris Hilton - onye nwe obi ụtọ Chihuahua maka puku dollar asatọ
Nna m bụ Lindsay Lohan gwara eziokwu niile banyere Yegor Tarabasov
Ntuziaka nke milkshakes na ice cream
Proctitis - mgbaàmà
Poteto na French
Nwa ahụ kụrụ isi ya - gịnị ka m kwesịrị ime?
Ụtụ isi - ọdịdị
Kedu otu esi eme ememe afọ 2?
Uru nke Pumpkins
Uwe ejiji Turkish
Kedu ka ụmụ ọhụrụ si ahụ?
Gịnị kpatara m ji hụ gị n'anya?